Bait And Switch Marketing - Expert avy amin'ny Semalt, Natalia Khachaturyan
Ny ankamaroan'ny tompona orinasa dia mahatsapa fa tsy ara-dalàna ny fananana sy fanodinana ny varotra. Diso izy ireo, saingy indraindray dia mety ho latsaka ao anaty fandrika ianao raha tsy misy ny fanekenao. Na eo am-pandinihana amin'ny tanjona ianao na tsia, tokony ho fantatrao ny fomba fiasan'ity asa ity ary nahoana no heverina fa diso izany.
Rehefa mandalo ny fotoana dia mihamitombo ny mpanjifa, ary na dia efa nahasoa aza ny tetika ara-barotra teo aloha, dia fantatry ny mpanjifa ny fomba fiovana sy ny fanakambana - comodo ssl sertifikası nedir.
Ny fomba fiasa sy fanodinana
The Strategist Content of Semalt , Natalia Khachaturyan, dia manazava fa midika izany fa ny orinasa dia mety hamoaka vokatra amin'ny vidiny ambany, fa rehefa mandehandeha ny vokatra ny mpanjifa dia hitany fa tsy misy izy io . Ankehitriny ny mpanjifa dia efa ao amin'ny fivarotana na tranonkala, ny orinasa dia hiezaka handresy lahatra azy ireo hahazo zavatra hafa izay lafo kokoa noho izay namboarina. Ao anatin'io toe-javatra io, ny kitapo dia vokatra namboarina tamin'ny vidiny ambany ary avy eo dia naverina tamin'ny zavatra hafa tamin'ny avo lenta izany.
Tsy ara-dalàna io paikady ara-barotra io amin'ny toe-javatra sasany satria dokam-barotra diso izany. Na izany aza, ny orinasa sasantsasany dia mety tsy ho sahirana amin'izany. Manana drafitra izy ireo hisintona ny iray amin'ireo tetika. Ohatra, afaka mametraka fanambarana momba ny vokatra izy ireo izay manondro fa azo amidy be ny vokatra. Hahita ny orinasa ary tsy ho afa-manahirana raha tsy mahita izany ianao..
Tsy ratsy ny fanoratana. Ny fametahana dia ampahany ratsy amin'ity drafitra ity. Ny baiko dia zaraina raha mbola tsy miova ny vokatra. Ny sasantsasany amin'ny fomba fanodinana sy ny famolavolana izay mety tsy ampiasainao dia:
Mampiasa ny anaran'ny mpifaninana aminao mba hisarihana ny fifamoivoizana amin'ny vokatrao
Miankina amin'ny teny nofidinao io tetika io. Raha manao dokam-barotra ny vokatrao na ny serivisinao ianao ary manonona ny teninao ho toy ny mivarotra zavatra iray izay tsy manana afa-tsy mpifaninana iray hafa malaza, dia azo lazaina ho toy ny fanangonana na famahanana ny mpanjifanao izany. Ara-dalàna ny mampitaha ny vokatrao amin'ny an'ny mpifaninana aminao, saingy diso ny mampiasa azy ireny mba hahatonga ny olona hitsidika anao.
Ampiasao ireo teny manan-danja tsy misy dikany sy ny SEO baita sy ny fametahana
Ny tanjona voalohany amin'ny fampiasana teny fanalahidy dia ny fanatsarana ny SEO. Manampy ny olona hahita vokatra mifandraika amin'ny orinasanao ary hampitombo ny fifamoivoizana ao amin'ny tranokalanao. Raha manao SEO ianao, dia mampiasa teny fototra tsy misy ifandraisany amin'ny an'ny orinasanao. Hanana teny tsy misy dikany na sandoka ianao, izay matetika no notadiavin'ny ankamaroan'ny olona mba hahafahan'ireo olona maro hiditra ao amin'ny tranokalanao fotsiny mba hahitanao ny vokatra samihafa amin'ny zavatra andrasany hitadiavana azy.
Raha toa ka mitovitovy amin'ny zavatra nataonao teo amin'ny orinasa ianao, dia zava-dehibe ny manamarika fa tsy voatery foana ny fahitana ny tranokala, indrindra raha tsy hiova ny olona hijery azy. Ny paikady dia antsoina hoe planeta mainty hoditra ao amin'ny SEO, ary tokony hialanao amin'izay izany.
Tena ilaina ny fitokisana amin'ny raharaham-barotra tsirairay. Aza mamono izany amin'ny fametrahana ny mpanjifa hieritreritra fa mamitaka azy ireo ianao ho toy ny famerenana an-tserasera toy izany, ka ny iray amin'izy ireo dia mety hanimba ny lazanao sy ny raharahanao amin'ny ankapobeny. Hamarino raha manao ireny hadisoana ireny ianao ao amin'ny fanentanana ara-barotra ary avaho izy ireo